mpt proxy သစ် — MYSTERY ZILLION
mpt proxy သစ်
ကျွန်နော်တို. 203.81.72.200 သမားလေး တွေ ဒီနေ. ညနေ 3.30 ကနေစပြီး no proxy ဖြစ်သွားပါပြီ။ မသိသေးတဲ. သူတွေ အတွက် သတင်းကောင်းပေးတာပါ။ဂျီမေး ဂျိတော. ကို လည်း ဒီ Proxy နဲ. ပဲသုံးလို. ရနေပါပြီ။ ပိတ်ထားတဲ. ဆိုဒ်တော်တော်များများကိုလညး် ပြန်ဖွင်.ပေးထားတာတွေ. ရပါတယ်။ youtube တော. မပါဘူးပေါ.။
ဟုတ်တယ်ဗျ . . .
ကျွတော့်ဆီမှာ ဂျီမေးဖွင့်ကြည့်တာ . . .ဒီလိုစာတွေပေါ်လာလို့ . . .
Dear Subscribers, Please reconfigure Internet Browser in your PC to get speedy internet service.
1. Procedure to remove proxy server setting in Internet Explorer (IE)
Click Tools > Internet Options > Connections > LAN Settings.
Local Area Network Settings window appears.
Click on check box under Proxy server.
The green tick mark will go.
2. Procedure to remove proxy server setting in Mozilla Firefox
Click Tools > Options > Network > Settings.
Click in the round box - no proxy.
The green tick mark appears in the round box - no proxy.
Please call 01-650870, 01-662707 for any queries.
After reading this message, type URL which you want to browse and click "Accept" button. Accept
အဲဒါတွေပေါ်လာလို့ . .သူပြောတဲ့အတိုင်းပြောင်းကြည့်လိုက်တယ် IE တော့ချက်ချင်းအဆင်ပြေသွားတယ် . . .Mozilla Firefox ကတော့ မရသေးဘူး . .စမ်းတုန်းပဲ . .ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူး . . .
သူပြောတဲ့အတိုင်းပြောင်းကြည့်လိုက်တယ် IE တော့ချက်ချင်းအဆင်ပြေသွားတယ် . . .Mozilla Firefox ကတော့ မရသေးဘူး . .စမ်းတုန်းပဲ . .ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူး . . .
ှုIE ,Mozilla Firefox နှစ်ခုစလုံးနဲ့ အဆင်ပြေပါတယ်
ဘာဘဲပြောပြော www.mediafire.com, www.4shared.com တို့လိုဆိုဒ်တွေ ပြန်သုံးလို့ရပြီ:):)
The URL you requested has been blocked. URL = www.youtube.com/
ဆိုပြီး error တက်နေတယ်...........
ွွှှTools>Option>Advance>Settings ထဲမှာ Direct internet connection (No Proxy) ကို check လုပ်လိုက်ပါ။
ဟုတ်ပါတယ် ကော်နက်ရှင် က နှစ်ဆလောက် ပိုကောင်းလာပါတယ်။ဘာလို.လည်းမသိဘူးနော်။ကော်နက်ရှင်ပါကောင်းအောင်လုပ်ပေးလိုက်တာလားမသိဘူး
ကိုေ၀ယံက တအားလောတာကိုးဗျ . .:P ခဏလောက်တော့နေပါဦး . .:32::d
သေချာစောင့်ကြည့်ပါအုန်းဂျ . . .:105:
MPT IPStar အတွက် Proxy ပြောင်းတာ ရှိသေးလားခင်ဗျား။
ygncache5.mpt.net.mm ကတော့ Proxy Not Found ပြနေတယ် :77: :77: :77:
အစမို့လို့ အရမ်းကောင်းနေတာဖြစ်မှာပါ။ နောက်တော့လဲ ဒီလိုပဲ ဖြစ်သွားမှာပဲ။:d
Mpt no proxy ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာ..ဟုတ်ပါတယ်.ဗျ... အခုလည်း ကွန်ကတော့ ကောင်းလာပါတယ်.. ဆာဗာ ထိုင်ထားရင်တော့..အဲဒီဆာဗာ က ဖွင့်ပေးမှ..no proxy နဲ့ ထွက်လို့ ရမှာပါ.. ဆာဗာ မှာ gateway တစ်ခုတည်းပဲထားမယ်ဆိုရင်တော့.. noproxy နဲ့လည်း..သုံးလို့ မရပါဘူး.. အရင်.က. 203.81.72.200 နဲ့ ထွက်တာပါ.. အခုတော့ ကြည့်လိုက်တော့..203.81.72.252 နဲ့ ထွက်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်.. 4shared တို့ mediafire တို့ ပွင့်သွားတာကို ကျေးဇူးတင်လှပါပြီ.. အရင်က ဒေါင်းလုပ်ချချင်ရင်.. ပုဂံ ဆိုင်တွေ ပြေးနေရတယ်.. အခု ဒီအတိုင်းချလို့ရသွားတော့..ပျော်စရာကြီး.......:)
MPT က Bagan Net ထက် ပိုမြန်နေသလိုပဲ။ အဲလို မမျှမတကြီးတော့ မလုပ်နဲ့လေ။ website တွေ အကုန်လုံးလည်း ဖွင့်လို့ရနေတယ်။ Bagan မှာတော့ ဟိုဟာပိတ်လို်က် ဒီဟာပိတ်လိုက်နဲ့။ connection က လည်း လေးလိုက်တာ လွန်ရောပဲ။ pfingo ကလည်း မရတဲ့ အချိန်က ခပ်များများ၊ ISP ချင်းအတူတူ MPT က မြန်ပြီး Bagan Net က လေးနေတာကျတော့ ဘယ်တရားမလဲဗျား။
no proxy ဖြစ်သွားပြီးကတညး်က ဘန်းထားတဲ့ ဆိုဒ်တွေလဲတော်တော်များများပြန်ပွင့်လာတယ် ..
MPT သုံးတဲ့လူတွေအတွက်တော့ သတင်းကောင်းပေါ့:103::103:
အကိုတို့ရေ ကျွန်တော်ဆီမှာ ကလိုင်းရန့်တွေက မရလို့ဗျ။ဆာဗာက တော့ရသွားတယ် ကလိုင်းရန့်တွေက အရင် ပရောက်စီနဲ့ တတ်တော့ MPT က Message ကြီးပဲပေါ်နေတယ်ဗျ ။အဲမက်ဆေ့ချ် အောက်ဆုံးမှာ Accept လုပ်ခိုင်းတာ လုပ်လိုက်တော့ အရင် ပရောက်စီနဲ့တော့ တတ်တယ်ဗျ။ ဒါပေမယ့် 4shared တို့ ဘာတို တော့ မတတ်ဘူး ဖြစ်နေတယ်အကို တို့ရေ ။ကူညီကြပါဦးဗျာ...အစအဆုံး ဘယ်ကစလုပ်ရမလဲခင်ဗျာ။ကျွန်တော်က နက်ဆိုင်က လခနဲ့ ယူသုံးနေတာပါ ။ခုတော့ ကိုယ့်ဘက်မှာ u95 နဲ့ ခံပြီးကျော်သုံးနေရတယ်ဗျ:D:D:D
MPT no proxy က gtalk တွေသုံးတာ connection ဆိုပြီး ရပ်ရပ်နေတယ်ဗျ။ sites တွေကတော့ အဆင်ပြေတယ်။ gtalk မှာ connection ဆိုပြီးရပ်လိုက် retry လုပ်လိုက်နဲ့ ၂ခါ ၃ခါ လောက်ဖြစ်ပြီးမှ တက်သွားတယ်။ အဲလိုဖြစ်ကြလားမသိဘူး။
အဲ.ဒီ proxy ကMPTadsl မှာသုံးလို.ရလားသိချင်လို.ပါ။
အကိုတို့ေ၇ .. ကျွန်တော်ခုသုံးနေတဲ့ MPT Ipstar မှာတော့ No Proxy သုံးလို့မရသေးဘူးခင်ဗျ
ADSL အတွက်ပဲလား မသိဘူးနော်
MPT က no proxy ဖြစ်သွားတော့ isa server မှာ direct connection ပြောင်းလိုက်တာ
sites တွေအကုန်လုံးကတော့ အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် gtalk ၀င်ရယ် connection ဆိုပြီးအကြာကြီးရပ်နေတယ်။ ပြီးရင် မ၀င်ဘဲ retry ပြန်ပြန်ပြနေတယ်။ တော်တော်ကြာကြာ၀င်မှ ရတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမရဘူး။ အဲဒါနဲ့ 203 proxy နဲ့ ပြောင်း၀င်လိုက်တော့ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း၀င်သွားတယ်။ ဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူး။ MZ မှာ isa သုံးတဲ့ အကိုတွေအမတွေ ဖြစ်ကြလားမသိဘူး။ သိတဲ့သူများရှိရင် ပြောပြပေးပါလား။
shoetilay ရေ ရသွားပီလားဗျ . . .ISA မှာ တစ်ခုခုပြင်ရမယ်နဲ့တူတယ် . . ကျွန်တော်လဲသိချင်လို့ . .
gtalk ကို detect automatically ကိုရွေးပြီး secureNAT နဲ့သုံးရင် ရတယ်ဗျ။ web proxy နဲ့တော့ မရဘူး။ sites တွေတော့ web proxy နဲ့ရတယ်
It have been so long i didn't writeapost
now i want to ask you all of our forum member that...
MPT now changes to new proxy and some of others say that it can be done
" Auto proxy " but when i put in autoproxy, i can't download the large file size about 200 MB and cause all the download manager with new proxy settings don't support resume function including rapidshare.com:((:((
here are others news proxy for MPT
203.81.72.252 port 0
Could the rest of members and mod and admins help me with this problem ?
ဟုတ်ပါတယ်။ no proxy ဖြစ်သွားတော့မှ mpt firewall က concurrent stream တွေက ကန့် လိုက်တယ်ထင်ပါတယ်။ IDM နဲ့ဆွဲရင် connection ၁ခု ၂ခု လောက်ပဲပွင့်တယ် ပြီးတော့ resume လည်းမရတော့ဘူး။ ဆိုးတာက ဆွဲနေရင်းတန်းလန်းနဲ့ ပြတ်ကျတယ်ဗျာ။
စိတ်ပျက်စရာပဲ။ MZ က mpt indial adsl သမားတွေ ဘာမှမဖြစ်ကြဘူးလားမသိဘူး။ ဘာမှပြောထားတာမတွေ့လို့
အဲဒါကတော့ ကျွန်တော်သိတာကတော ကျွန်တော်တို့လည်းကြုံဘူးပါတယ် ကျွန်တော်တို့တော့ accept ကိုနှိပ်လိုက်တာဂျလုပ်ကြည့်လိုက်ပါအုံး နော်
တောင်ကြီးတော့ ပိုဆိုးသွားတယ်ဂျ..သိသိသာသာဘဲ..gtalk ဆို ၀င်တာတော့ မြန်တယ် ပြောမယ်ဆို ပျောက်ကုန်တယ်
bro ပြောတာ ဟုတ်တယ်ဗျ. ကျွန်တော်လဲ အဲလိုကြုံနေတယ်..